musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Eswatini Breaking News » Embassy yeUS muEswatini yambiro: Gara Kumba!
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Eswatini Breaking News • Hurumende Nhau • Investments • nhau • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Mamiriro ezvinhu muHumambo hweEswatini anoramba akaomarara asi anoita kunge ari pasi pehurumende, nevapanduki vanofungidzirwa kuti vanoshanda munyika.
Eswatini Airlink uye inoshanda naye, Airlink, yendege yekuSouth Africa inogara mudzimba uye nharaunda, yamisa nendege nhasi pakati peJohannesburg neKing Mswati III International Airport kuEswatini, nekuda kwemhirizhonga muHurumende yeEswatini.
Mumwe mukuru wehurumende akaudza eTurboNews: "Tinotenda kuti munyika muno mune vapanduki."
Sekureva kwezvinyorwa zveTN, hapana zvinyorwa zvemapepanhau nhasi nekuda kwemhirizhonga yakaitika muguta guru reMbabane nezuro. Nhepfenyuro dzenyika dzinoramba dzichidzokorora nhau dzanezuro, uye internet yakadzongonyedzwa nezuro husiku.
Mamiriro ezvinhu muEswatini anoramba akadzikama mushure mehusiku aine nguva yekudzora pamba.
eTurboNews chinyorwa paEswatini chakabatwa pakati peTaiwan neChina akapfupikisa mamiriro pamusoro peichi chiitiko chiri kuenderera. Inogona kupa fungidziro yekuti iyi mamiriro angave ari nzira kupfuura kungoita vagari vane hasha vanoda shanduko.
Sekureva kweruzivo kubva kuEswatini, varatidziri vakavhara Times repepanhau reEswatini nekutsigira mambo nehurumende. Eswatini Beverages, an subsidiary yeSABMiller ABinBev uko Mambo Mswati ane masheya akapiswa nevaratidziri.
"Nekuda kwekuchengetedzeka nekuchengetedzeka kwevatengi vedu nevashandi, uye mukutaurirana nemumwe wedu Airlink, tafunga kumbomisa kuita kwedu munzira iri pakati peJohannesburg neSikhuphe (Eswatini). Ticharamba tichiongorora mamiriro ezvinhu uye tichadzorera mabasa akajairwa kana zvangoitika chete, ”akadaro Eswatini Airlink General Manager, Joseph Dlamini.
Kubhururuka kwakabviswa (30 Chikumi 2021) ndeiyi:
Vakuru venyika vakaraira nguva yekumira yakasimba nguva yekupedzisira usiku ndokuvhara internet. Kutaurirana nenyika dzekunze kwaive kushoma. Zvinoita kunge zvadzoka kumashure izvozvi. Kwayedza yakataurwa eTurboNews: "Mishumo yauri kuona pano haisi iyo nhoroondo yakazara."
Sekureva kwemishumo isina kusimbiswa neyakavanzika yenhau yekuSouth Africa yakazvimirira IOL vashandi vebhazi vakafungira uye vakavhura bhaketi rine muchero weNyii (muchero wemusango wakabva pamuti mutsvuku weIvorywood), vachiwana zvinoputika zvakavanzwa pasi pazvo. Michero yakaiswa mubhazi nemusikana ane makore gumi nematatu ekuberekwa.
Embassy yeUS iri kuyambira vese vagari vemuUS kuti vazive kusagadzikana kwevanhu muHumambo. Mamiriro ezvinhu ari kuitika kuEswatini, kusanganisira kupisa nekupamba zvitoro, mota nemabhizinesi. Kuratidzira kwave kuvaka muMbabane mangwanani ese uye zvitoro zviri kuvharwa. Embassy yeUS iri kukurudzira zvikuru vagari vese, nyika yese, kuti vaunganidze chikafu nemvura vagare kumba. Vashandi veEmbassy vakanzi vagare pamba. Vagari vemuUS vanokurudzirwa kuti vadzivise migwagwa mikuru sezvo varatidziri vari kuvharira nzira nezvinhu zvinopisa. Embassy yeUS icharamba yakavharwa kusvika Chitatu, Chikumi 30. Vagari vemuUS vanoda rubatsiro rwechimbichimbi vanofanira kufonera Consular Chikamu.
Embassy yeUS inokurudzira mugari weUS muEswatini kutora matanho anotevera:
Kana zvakachengeteka, chengetera pane zvekutengesa nemvura wozogara kumba.
Tarisa midhiya yemuno kuti ivandudze.